Posted by တန်ခူး at 3:22 PM
အဟီးး........လေနဲ့ မှုတ်တာ တော်တော်ရယ် ရတယ် အစ်မကြီးကလည်း လွဲတတ်ပါ့ ဟဟား ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးကျနော် အ၇မ်းရယ်နေလို့ ဘေးက လူကမေးနေပြီး ဘယ်လိုဖြေရပါ့း)
Tag တာ ကျေးဇူးဗျ ကျနော်ရေးပြီးပြီး
အကြွေးကို ချက်ချင်းဆပ်တာ :P
တယ်လီဖုန်းလေနဲ့မှုတ်၊ မှန်ထေဲက မျက်လုံးသေးသေးလေးး....။ ဘော့စ်ကလည်း ကလေးထိန်းနေရသလို ထင်မယ်နော်...။
တန်ခူး အလွဲလေးတွေက ပျော်စရာ လွမ်းစရာလေးတွေပါလား... ဟဲဟဲ.. အဲဒီတုန်းကလို အပျော်မျိုး ဘယ်ရှိတော့ပါ့မလဲ...။ ရီရတယ်..လေနဲ့မှုတ်ပေလို့ပေါ့..။
တန်ခူးရေ..အမှတ်တရအပျော်လေးတွေ ဝေမျှပြီး တက်ဂ်ထားတာကို ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးနော်..။
အမတန်ခူးရေ ရယ်လိုက်ရတာ။ ကလေးဆိုးကြီးပေါ့နော်။ ဖြစ်ရမယ် လေနဲ့မှုတ်ကြတာတဲ့။ အလုပ်ခွင်ပေမယ့် ပျော်စရာကောင်းသားနော်။ အုပ်စုညီတော့ ပိုပျော်စရာကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အတော်ရီရသဗျာ... ပါးစပ် မပိတ်နိုင်ပဲ ပြန်သွားတယ်...း)
ဒီလို အချိန်မျိုးတွေ ပြန်မရတော့ဘူး
မမရဲ့ အလွဲတွေက တကယ်ရီရတာပဲ.. ဂိမ်းဆော့ရင်းတောင် Boss ကို “နေစမ်းပါ ဒီမှာနိုင်ခါနီးနေပြီ” လို့ပြောတဲ့ မမကို တကယ်ချီးကျူးတယ်... ဂိမ်းကလည်း အသည်းအသန် ဖိုက်ရပြီဆို ဘေးနား ဘာပဲ လာနေ လာနေ မရတော့ဘူးနော်.. လွမ်းစရာလေးတွေပေါ့ အမရေ.. :D
လေနဲ့ မှုတ်တယ်တဲ့၊ ရီလိုက်ရတာ။ ဂိမ်းကလဲ ဆော့သေးတာ။ အလုပ်မဖြုတ်လိုက်တာ ကံကောင်းပါလား။
ချိုသင်းလဲ ရေးမယ် အမ။ မနက်ဖြန်ညကျရင် ရေးမယ်လေ။ ဒီညတော့ ဒီကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်နေတဲ့ ရွှေဂျမ်းကို သွားတွေ့မလို့။ အပြင်မှာ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေ ဆုံရတာ ဂျမ်းနဲ့ဆို ၃ယောက် ရှိပြီ။ အားလုံး ဆုံကြရရင်ကောင်းမှာနော်။
ရီလိုက်ရတာ.. ဟုတ်တယ်.. မြတ်နိုးလဲ အဲလိုပဲ..ဟီး
အမရေ..တက်တဲ့အတွက် ကျေူးဇူးပါ။ အမရေ.. စာရေးရမှာလဲ ပျင်းနေတယ်..ပီးတော့ အလုပ်တွေလဲ ရှုပ်နေတယ်..ဘလော့ရေးရတာ စိတ်မပါဖ်ြစ်နေတယ်အမရေ..
ဘလော့တောင် ပိတ်တော့မလားလို့ လာချောင်းတဲ့သူတွေကို အားနာနေလို့..။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ အမရယ်နော်..။ တကယ်လို့ရေးဖြစ်ရင်လဲ အမရဲ့ ပို့စ်က နောက်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ခြေသလုံးတွေ တောင့်အောင် ပြင်တယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ် အမရယ်... ပျော်စရာ အချိန်လေးတွေ ရှိနေသေးလို့လည်း တော်သေးတာပေါ့...
ကျနော် အကြွေးဆပ်ထားပါတယ် အမ လာဖတ်လှည့်ပါဦး
အစ်မက တော်တော်ဆော့တာကိုး ဟဲဟဲ။ ပျော်စရာကြီး။ ငယ်ဘ၀က ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်တယ်။
အစ်မ tag တာ ပုံရိပ်လည်း စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ ရေးမယ်နော် :)
အမ မအားတဲ့ကြားက စိတ်ညစ်တာနဲ့ ပျော်စရာလေးစဉ်းစားပီး ရေးပီးပါပီ။
တို့လဲ ရေးရအုံးမယ် ဘာရေးရမှန်းတော့ မသိသေးဘူး
များလွန်းလို့ စဉ်းစားနေရတာမျိုးပါ.. ဟဲဟဲ
ဟော ဟိုမှာဟိုမှာ ... လုံးလုံး လုံးလုံးလေး လိမ့်သွားတယ် ဆိုပြီး ဘော့စ်ကို ၀ိုင်းကူ ဖမ်းပေးချင်လိုက်တာနော်
အမရေ Tag ထားတာ ရေးပြီးကြောင်းပါ။ အိပ်ပြီ။
မောင်မျိုးရေ… အကြွေးကလဲ ကြိုဆပ်ထားတာပေါ့… ရယ်မောပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်မောင်လေးရေ…
ဟုတ်တယ်ညီမရေ… ဘော့စ်လဲ အတော် စိတ်ညစ်ရှာမှာပဲ… ညီမဘလော့ဂ်လိပ်စာလေးကို ပြောပြပါဦး sin dan lar ရေ…
မ ရေ… ဟုတ်ပါတယ်… တခါတခါ အပျော်တွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲလို့အံ့သြမိတယ်… အမှတ်တရ တက်ဂ်ပေးတာကျေးဇူးပါ မရယ်…
နိနိရေ… ဟုတ်ပါတယ်ညီမရေ… အုပ်စုညီလို့ လဲ ပိုပျော်စရာကောင်းတာပါ… ခုထိအဲဒီအုပ်စုက ဒီမှာလဲ တတွဲတွဲပဲညီမရေ…
ကေရေ… အလွဲတွေက အချိန်တွေကြာလာတော့ အလွမ်းတွေဖြစ်ရောနော်…
ကိုအောင်သာငယ်ရေ… ဟုတ်လို့ လား… ကျွန်မက ရယ်စရာသိပ်မရေးတတ်ဘူး… အရင်က ရယ်စရာ စာတပုဒ်ရေးပြီး သူငယ်ချင်းကို ပေးဖတ်တာ သူက ရေးသူပဲ ရယ်နေပြီး ဖတ်သူက မရယ်ရဘူးလို့ပြောဖူးတယ်… ဒါလေးရေးတော့ အဲလိုများဖြစ်နေမလားလို့တွေးပူမိသေးတာ…
ဟုတ်တယ်ပန်ရေ… ပြန်မရနိုင်တဲ့ နုနယ်ပျိုမျစ်တဲ့အပျော်တွေ…
နုရေ… ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိလို့သားနဲ့ ဂိမ်းမဆော့ဘူး… တော်ကြာ… ကိုယ်စိတ်ပါလာရင် သားတောင် ဆော့လိုက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး…
ပေါက်ရယ်… အလွဲလေးတွေ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်… ရေးစရာထွက်လာလိမ့်မယ်…
ဟုတ်တယ် ချိုသင်းရေ… ခုချိန်လူကြီးစိတ်နဲ့ ပြန်တွေးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒုတ်ကလေးနဲ့ သာ ခပ်စပ်စပ် ရိုက်ချင်တော့တာပဲ…
မြတ်နိုးရေ… ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ… ဘလော့ဂ်တော့ မပိတ်ပါနဲ့ လေ… လွမ်းလို့ နေတတ်မှာ မဟုတ်ဘူး….
ပျော်အောင်နေရတာပေါ့ညီမရေ… အမတို့ ရုံးကြီးက အပြင်လူလဲ ၀င်လို့ မရ… တချို့ ဆို ထောင်ကြီးနဲ့ တူတယ်လို့ တောင် ဆိုသေးတယ် ညီမမီယာရေ…
ကိုဇနိတို့ အလွဲလေးက ရင်ခုန်စရာ ပြီးတော့ ချစ်စရာအလွဲလေးနော်… ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါကိုဇနိနဲ့ နိနိရေ…
အင်း… တဖြေးဖြေးနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ပေါ်ကုန်တော့မယ် ပုံရိပ်ရေ… ရေးလဲရေးသေးဘူးနော်… လာလာချောင်းတယ်…
မြတ်နိုးရေ… မအားတဲ့ကြားထဲက ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ… စာတမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ် ညီမရေ…
သက်ဝေရေ… စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်… သက်ဝေရဲ့အလွဲလေးတွေကို…
မ ရေ… ဟိဟိ… အဲဒီလုံးလုံးလေးကို ဘော့စ်က မမြင်ဘူးလေ… ဒီကလဲ လျင်တာကို…ပြီးတော့ သူကလဲ အမြင်ကျဉ်းတာကို…
ဟင်… မမကလဲ… ကော်မန့် ပေးတာ ကတ်စေးနဲလိုက်တာ…
ချိုသင်းရဲ့ ဖော်ဖော်ရွေရွေအလွဲလေးတွေက ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ… ကျေးဇူးပါညီမရေ…
မမရေ… ကျေနပ်သွားပြီ… ခုကတ်စေးမနဲတော့လို့ ….
ရယ်လိုက်တာ အစ်မတန်ခူးရယ် ... မောင်မျိုးဆီကတဆင့်အစ်မဆီရောက်လာတာ ...း)
ha..hah.. now i knew who you are? u working under Daw Wai Ye right..? yr korea Boss is Mr. Lee .. am i right??? ha..hah